Etu esi etinye Ambiance / Radiance na LMDE | Site na Linux
Etu esi etinye Ambiance / Radiance na LMDE
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Ọdịdị / Nhazi, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Na nchekwa nke Debian / LMDE enwere ụfọdụ isiokwu Gtk na-akpali nnọọ mmasị ma dị mma na akara ngosi setịpụrụ, ma ọ bụghị mara mma ezuru m uto.
Ndabara isiokwu na LMDE, Mint-X, M na-achọta ya kemmasi, ma site n’oge ruo n’oge ọ dị mma ịdị iche na Ambiance / Ntughari isiokwu Gtk nke na-abịa na ndabara na Ubuntu, ha mara mma n’ezie.
Echiche bụ isi na nke a:
na nke a:
ma ọ bụ ihe a:
Ihe mbụ anyị ga - eme bụ ịgbanwe oke na nhọrọ Synaptic nke mere na ọ na-ewe dị ka ebe nchekwa ya bụ isi nke Nyocha Debian ọ bughi kwa nke LMDE. Nke a dị mkpa n'ihi na mgbe ị na wụnye .deb na gburugburu nke Ubuntu, anyị ga-enwe a dependency njehie, n'ihi na engine Gtk de Murrine arụnyere emeela ochie.
Anyị na-emeghe Synaptic »Ntọala» Mmasị na na nkesa taabụ anyị họrọ Testing.
Nke a ga - adị ire ma ọ bụrụ na ha ahazi ụzọ nchekwa m etu m siri kọwaa ya njikọ a. Ọfọn, anyị na-emelite nchịkọta ndị ahụ site na iji Synaptic ma ọ bụrụ na anyị emebeghị otú ahụ, ma wụnye gtk2-engines-murrine.
Mgbe e mesịrị, anyị na-ebudata faịlụ 3 n'ụdị .deb, nke nwere: Isiokwu Ubuntu Mono, Ubuntu Ihe omuma mmadu na Gburugburu Ubuntu Gtk, ndị a niile dị mkpa iji nwee ike ịwụnye n'ụzọ ziri ezi. Anyị na-etinye ha niile n'otu folda ahụ, mepee ọnụ ma gbue:
Ekwesịrị itinye ha n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Anyị nwere ike ịhọrọ isiokwu ọhụrụ na NchNhr »Ngwa» Mmasị »Ọdịdị, ma a gaghị egosipụta ngwugwu ndị i nwere Gnome 3, yabụ anyị na-etinye ngọngọ m gosipụtara na ya Akụkọ a.
1 Mbanye maka Ambiance.
2 Mbanye anataghị ikike maka Radiance.
Mbanye maka Ambiance.
sudo cp -r / usr / share / themes / Ambiance / / usr / share / themes / Ambiance3 / sed -e 's / Ambiance / Ambiance3 / g' /usr/share/themes/Ambiance/index.theme | sudo tee /usr/share/themes/Ambiance3/index.theme sudo cp -r /usr/share/themes/Adwaita/gtk-3.0/ / usr / share / themes / Ambiance3 /
Mbanye anataghị ikike maka Radiance.
sudo cp -r / usr / share / themes / Radiance / / usr / share / themes / Radiance3 / sed -e 's / Radiance / Radiance3 / g' /usr/share/themes/Radiance/index.theme | sudo tee /usr/share/themes/Radiance3/index.theme sudo cp -r /usr/share/themes/Adwaita/gtk-3.0/ / usr / share / themes / Radiance3 /
Nke a ga-ezu karịa 😀
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Etu esi etinye Ambiance / Radiance na LMDE
Daalụ nke ukwuu, ọ rụrụ ọrụ dị ukwuu 😀 !!!, ọhụụ ọhụrụ a mara ezigbo mma na ndị otu m.
Ederede ọ bụla na isiokwu a (tuning) nwere ekele dị ukwuu ...
Obi dị m ụtọ na ọ baara gị uru. Ọ bụ ezie na n'eziokwu, tupu ebipụta isiokwu ahụ, m gbalịrị ya, nke mere na enweghị njehie.
Daalụ maka ịkwụsị
Nnukwu onyinye! M na-eji ya na Debian ma ọ na-arụ ọrụ zuru oke. Daalụ nke ukwuu 🙂
Obi dị anyị ụtọ na ọ jeere gị ozi 😀
Oge Ubuntu 12.04 kpebiri.
Esi gbanwee engine search na adreesị mmanya nke Firefox